Lọ ọrụ na-akwụ ụgwọ | China Guzosie Pouches Nsukka, Suppliers
Ebube a na-ahụkarị bụ nhọrọ nkwakọ ngwaahịa na-ewu ewu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, ọkachasị maka ngwaahịa mmiri na mmiri mmiri. Ebumnuche maka pouches ndị a na-ahụ anya bụ ezigbo onye ọrụ na itinyekwu ya n'ọrụ ma e jiri ya tụnyere nhọrọ ndị ọzọ nwere atụmatụ nke ịdị mfe. Ngwaahịa ndị a na-ebupụta nke anyị na-enye na-arụ ọrụ dị elu na teknụzụ na-ebi akwụkwọ ma nwee ike ịchekwa ma bufee ngwaahịa mmiri na akọrọ na-enweghị ọgbaghara. Enwere ike ịhazi ogo na ụdị dị ka ndị ahịa chọrọ na ihe achọrọ.
Ekike pouches na-abụ ezigbo nhọrọ nhọrọ maka ịkpọgharị akara. Ha dị ezigbo mma-enyi na enyi. N'iji teknụzụ na-ebi akwụkwọ na-ebi akwụkwọ dị elu, anyị nwere ike ịmepụta obere akpa ọ bụla maka ụdị ngwaahịa gị kachasị mma na agba na nha dị iche iche.